Microsoft neIntel vane nzira nyowani yekuona malware | Linux Vakapindwa muropa
Nguva dzese ipapo yakajairika uye yakawedzera malware, pamwe nemhando nyowani dzekurwiswa kwecyber. Asi matekinoroji ekumisa iyi mhando yekodhi yakaipa iri kuvewo nedzimwe shanduko uye shanduko, kubva mukushandiswa kweAI tekinoroji yekuita kuti masisitimu ekuona ave nehungwaru, kune dzimwe nzira dzakawanda dzekuzvidzivirira.
Intel uye Microsoft takashanda pamwechete kuunza nzira nyowani uye yekutanga kuona malware nekuongorora kodhi yemapurogiramu anonyumwira neimwe nzira chaiyo. Iyo inosanganisira kugadzira mufananidzo kubva kune iyo kodhi iwe yaunoda kuongorora uye kutsvaga kwekutyisidzira nekuda kwekushandisa kweAI.
Kunyangwe ichiita sechisinganzwisisike, zita reizvi chirongwa chinonzi STAMINA (STAtic Malware-se-Mifananidzo Network Ongororo). Icho chaicho kuita kwehunyanzvi hunoshandura fungidziro kodhi kuita yakajeka grayscale kuitira kuti AI inozozoiongorora iyo yemapatani akafanana kuti aone yakaipa kodhi nekuenzanisa mapatani.
Mufananidzo wacho wakadzikiswa kuitira kuti AI isafanirwe kuongorora mamirioni emapikisheni uye inogona kuita lighter scan pasina kukanganisa mhedzisiro. Iyi AI yakatove yakadzidziswa, sezvo yanga ichidyisa algorithm yayo kuburikidza nemasampula esisitimu ine anopfuura mamirioni 2.2 mahesheni emafaira anehutachiona anokwanisa kuitira kuti idzidze kubva kwavari iwo maitiro akafanana avanayo uye nekudaro anogona kuaona.
Un weird nzira iyo inoenda kubva kune binary kodhi kuenda kumaphikseli eAI kuongorora iyi data. Chokwadi chimwe chinhu changa chisati chaonekwa kusvika zvino. Uye sekureva kwevaongorori vanobatanidzwa, zvinoita sekunge inogona kuona nekuisa malware ne 99,07% chaiyo. Nenhamba yechokwadi yakanaka ye2,58% (iyo ichiri yakakwira zvakanyanya). Saka iri kuvimbisa, asi inoda kunatswa, pamusoro pekuvandudza basa rako nemafaira makuru, uko kwazvinotonyanya kushanda ...
Kuti uwane rumwe ruzivo - Purojekiti whitepaper
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft neIntel vane nzira nyowani yekuona malware
Kali Linux 2020.2 ikozvino yave kuwanikwa, pamwe nekuvandudza muPlasma neGNOME shanduro